युरोकप फुटबल आज रातिदेखि सुरु हुँदै, कस्ले जित्ल त उपाधी ? - MeroKhelkud
युरोकप फुटबल आज रातिदेखि सुरु हुँदै, कस्ले जित्ल त उपाधी ?
२०७८ जेष्ठ २८ गते २०७८ जेष्ठ २८ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर773LeaveaComment on युरोकप फुटबल आज रातिदेखि सुरु हुँदै, कस्ले जित्ल त उपाधी ?
काठमाडौं, २८ जेठ । ‘मिनी विश्वकप’को रुपमा परिचित युरोकप फुटबल प्रतियोगिताको १६औं संस्करणको आजदेखि सुरु हुँदैछ । इटालीको रोममा टर्की र इटालीबीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति १२ बजेर ४५ बजे सँगै युरोकप औपचारिक रुपमा सुरु हुने भएको हो । ओलम्पिक स्टेडियम हुने उद्घाटन खेलमा दुबै टोली जित निकाल्दै सुखद् सुरुवात गर्ने लक्ष्यमा रहेका छन् ।
यसपटक युरोपका १० देशका ११ शहरमा यो प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ । प्रतियोगिता सुरु भएको ६० वर्ष पुगेको अवसरमा युरोपका ११ शहरमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको हो । जुलाई ११ सम्म खेलिने युरोकपको फाइनल खेल लन्डनस्थित वेम्ब्ले स्टेडियममा हुने तालिका छ ।
युरोकपमा २४ टोलीलाई सहभागी गराईएको यो पहिलो पटक हो । सहभागी टोलीहरुलाई ६ समुहमा विभाजन गरिएको छ । प्रत्येक समुहको विजेता र उपविजेतासँगै तेस्रो हुने ६ टोलीमध्ये उत्कृष्ट चार टोली ‘राउण्ड अफ सिक्सटिन’मा प्रवेश गर्नेछन् ।
विश्वकप छनोटमा आज नेपालले बलियो अष्ट्रेलियासँग खेल्दै, कस्ले जित्ला त खेल ?
युरोकप जित्ने टिमले कति पाउँछ पुरस्कार राशि ? जानीराखौं
पेरुविरुद्धको कोलम्बियाको सानदार जित
अष्ट्रेलियाका प्रशिक्षक जर्हाम अर्नाेल्डले नेपाली टिमको तारिफ गर्दै भने ‘नेपाल मेहनती टिम हो’
२०७८ जेष्ठ २७ गते २०७८ जेष्ठ २७ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर
यस्तो छ नेपाल र इराक बिचको ‘हेट टु हेड’
२०७८ जेष्ठ १३ गते २०७८ जेष्ठ १३ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर